तुफान स्याली : घातक आँधीले अमेरिकामा ५५०,०००मानिस बिजुलि बिना बस्न बाध्य::Jalpa Khabar
तुफान स्याली : घातक आँधीले अमेरिकामा ५५०,०००मानिस बिजुलि बिना बस्न बाध्य
Published on: १ आश्विन २०७७, बिहीबार १३:३३
अमेरिका : उष्णकटिबंधीय तूफान सालीले अमेरिकाको खाडी तटमा ठूलो मुसलधारे वर्षा र आँधीबेहरीले गर्दा बिना आधा पचास लाख भन्दा बढी अमेरिकीहरूलाई शक्तिविहीन छोडेको छ।
बुधबार श्रेणी २ आँधी तूफानको रूपमा ल्याण्डलिभेट गरेपछि सैली कमजोर भयो, तर ढिलो चलिरहेको आँधीबेहरीले फ्लोरिडा र अलाबामाको ब्याटि। गर्न जारी छ।
एक जना व्यक्तिको मृत्यु भयो र सयौंलाई बाढी भएका क्षेत्रहरूबाट उद्धार गरियो।
फ्लोरिडाको पेन्साकोलामा नराम्रो चोट लागेको थियो र एउटा फुच्चा बार्जले खाडी ब्रिजको केही भाग खसाल्यो।
“फ्लोरिडा पानहण्डले र दक्षिणी अलाबामाको भागहरूमा विनाशकारी र ज्यान जोखिमपूर्ण बाढी जारी छ,” राष्ट्रिय तूफान केन्द्र (एनएचसी) ले भने।
यो आँधीबेहरीले “चार घण्टामा चार महिनाको वर्षा” शहरमा ल्याएको छ, पेनसकोला फायर प्रमुख गिन्नी क्रानोरले सीएनएनलाई बताए।
अलाबामाको ओरेन्ज बीचमा एक व्यक्तिको मृत्यु भयो र अर्को हराइरहेको थियो, मेयरले थप जानकारी नदिई भने।
स्यालीले गल्फ शोर्स, अलाबामामा बुधबार स्थानीय समय ४:४५ बजे लैन्डफॉल गर्‍यो, अधिकतम वायु गति १०५ mph (१६९ किमी प्रति घण्टा) को साथ।
एनएचसीका अनुसार श्रेणी २ आँधीबेहरीमा ९६ देखि ११० माइल प्रति घण्टाको हावा रहेको छ। एनएचसीका अनुसार श्रेणी २ को आँधीबेहरीको “अत्यन्त खतरनाक बतास” ले सामान्यतया घरहरू र थोरै जराका रूखहरूलाई क्षति पुर्‍याउँछ।
आँधीबेहरी पछि ३५ मीमी प्रति घण्टाको साथ उष्णकटिबंधीय डिप्रेसनमा परिणत हुन्छ, तर यो वर्षाको र ठूलो आँधीबेहरीको कारण भएको छ जसले सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्‍याएको छ।
मिडिया क्याप्शनहरिकेन सैलीले दक्षिणी अमेरिकामा अवतरण गर्छ
आँधीबेहरी किनारबाट उत्तरमा सर्दै जाँदा, प्रभावित रिपोर्टहरूमा करिब ५५०,००० बासिन्दा बुधवार रात अन्धकारमा छोडियो, स्थानीय रिपोर्ट अनुसार।
स्याली अटलान्टिक महासागरमा रहेका थुप्रै आँधीबेहरीमध्ये एक हो, अधिकारीहरूले आँधीबेहरीको नाम राख्न चिठी निकालेका छन् किनकि उनीहरूले उनीहरूको वार्षिक वर्णमाला सूचीको अन्त नजिक छ।
क्षतिको पछिल्लो के हो?
केही स्थानमा वर्षा इन्चको सट्टा फुटमा नापी रहेको छ, तर धेरै क्षेत्रहरूमा १८ इन (४५ सेमी) रेकर्ड गरिएको छ।
तूफान: विश्वको सबैभन्दा घातक आँधीबेहरीको लागि एक गाइड
व्यस्त तुफान मौसम ‘ग्रीक जाँदै छ’
मौसम पक्ति ट्रम्पले अग्निबाट प्रभावित यूएस वेस्ट कोस्टको भ्रमण गरे।
फिटको गहिराइमा पुग्दै सेन्ट्रल पेनसकोलामा हिट। आँधीबेहरी बढेको शहरमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा तेस्रो विपत्ति भएको थियो। त्यहाँका प्रहरीले क्षति हेर्न बाहिर नजानु भनेर मानिसहरूलाई भने: “यसले हाम्रो प्रगति सुस्त पारेको छ। कृपया घरमा नै बस्नुहोस्!”
यद्यपि बतासलाई घातक तूफान लौराको विनाशकारी शक्ति थिएन, जुन गत महिना प्रहार भयो, तिनीहरूले अझै पनि मुरिंग्सबाट डुङ्गा च्यात्ने र एक बार्जी हेरचाह अन्तर्गत निर्माण बे पुलमा पठाए। तिनीहरू अवश्य पनि उच्च-सवारी सवारीसाधनहरू पछाडि पुग्यो।
अर्को बार्ज ढीला भयो र एस्कम्बिया खाडी ब्रिजतिर लागे तर भाग्यले किनारमा दौड्यो।
एस्कम्बिया काउन्टीका शेरिफले भने कि यो स्यालीले गरेको विनाशको आशा गरिरहेको थिएन।
मोबाइल, अलाबामामा ओभरटर्न गरिएको वाहन। त्यहाँ धेरै सडकहरू रूखहरू झर्दै मारिए
मोबाइल, अलाबामामा बस्ने वर्षीय क्याविन होलिहाण्डले रोयटर्सलाई भने: “वर्षा भनेको यस्तै हो: यो अव्यावहारिक छ।”
फ्लोरिडा-अलाबामा सीमामा “जीवन धम्कीको खतरा” अझै बाँकी छ, एनएचसीले भने।
अलाबामाका गभर्नर के आइवेले भने कि मोबाइल वरिपरिका धेरै क्षेत्रहरूले ऐतिहासिक बाढीको स्तर देखेका थिए र मानिसहरूलाई चेतावनीलाई ध्यान दिन आग्रह गरे।
अलाबामाको गल्फ स्टेट पार्कमा घाटमा ठूलो क्षति भयो।
अलाबामामा खाडी किनाराले सल्लीको अवधारणा र यसको मुसलधारे वर्षाको आयोजना गर्‍यो
वेबसाइटबाट विद्युत कटौतीको पछिल्लो समाचारले अलाबामा २९०,००० र २५३,००० बढी फ्लोरिडामा बिजुलीविना २ ग्राहकहरूको सूची बनाएको छ।
पाइलोनहरू तल ल्याउँदा, थुप्रै रूखहरू उखेले।
अलाबामामा वर्षा बगैंचामा देखा पर्‍यो, जसले आँधीबेहरीको कारणले गर्दा सडकहरू डुबेको थियो। समुद्री किनारका अन्य क्षेत्रहरू पनि प्रभावित भए, मिसिसिपीमा समुद्री तट र राजमार्गहरू डुबाएर र ल्यूजियानामा निम्न-साना सम्पत्तिहरू बढिरहेको पानीले ढाकिएपछि।
अलाबामा, फ्लोरिडा र मिसिसिपीले आँधीबेहरी अघि आपतकालिन अवस्था घोषणा गर्‍यो।
के मौसम परिवर्तनले आँधीबेहरीको ढिलो गति पैदा गरिरहेको छ?
बर्मिंघम, अलाबामाको नेशनल वेदर सर्विसमा जोन डि ब्लकले न्यु योर्क टाइम्सलाई बतायो कि स्याली “एक क्यान्डी शपमा बच्चाको गतिमा” गइरहेकी थिई।
विज्ञहरूको भनाइमा स्यालीको गतिलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्न सकिन्छ। नेचर पत्रिकामा २०१८ को एक अध्ययनले पत्ता लगायो कि तूफान र उष्णकटिबंधीय आँधीबेहरी जुन क्षेत्र माथि सार्दछ १९९४ and देखि २०१६ को बीचमा १०% ले कमी आएको थियो, जुन कुल वर्षामा बृद्धिसँग जोडिएको थियो।
“सेलीको एक विशेषता रहेको छ जुन प्राय: देख्न सकिदैन, र यो एक ढिलो गति हो र यसले बाढीलाई बढाउने छ,” एनएचसीका उप निर्देशक एड रप्पापोर्टले एसोसिएटेड प्रेसलाई भने।
स्याली बाहेक, चार अन्य उष्णकटिबंधीय चक्रवातहरू छन् – पाउलेट, रेने, टेडी र विकी – एट्लान्टिक महासागर बेसिनमा घुम्ने।
यदि एउटा मात्र आँधीलाई आधिकारिक रूपमा नाम दिइएको छ भने – विल्फ्रेड पहिले नै छनौट भइसकेका छन – मौसमविद्हरू बाँकी वर्षको लागि चयनित नामहरू चलाउनेछन् र यस्तै ग्रीक वर्णमाला पछि नयाँ आँधीबेहरीको नाम दिन थाल्नेछन्।